भारत–चीनबीच भिडन्त भए नतिजा कति खतरनाक ? : बिबिसीको टिप्पणी – Online National Network
५ श्रावण २०७४, बिहीबार ०२:३७
काठमाडौं, ५ साउन – भारत र चीनबीच बढ्दो तनावबीच कैयौँ यस्ता प्रश्न छन्, जसले भारतलाई चिन्तित बनाइरहेका छन् । चीनको सामना गर्न भारतको तयारी कस्तो छ ? यसैबीच लोकसभामा मुलायमसिंहले भने कि चीनले भारतमाथि आक्रमणको तयारी गरेको छ ।
एससिएमपीले अगाडि लेखेको छ— चीन कैयाैँ नयाँ परियोजनाका माध्यमबाट आफ्नो विस्तार गरिरहेको छ । चाइना–हिन्द महासागर–आफ्रिका–भूमध्यसागर ब्लु इकोनोमिक करिडोर पनि पार गरिरहेको छ । यसबाट चाइना–इन्डोचाइना प्रायद्वीपलाई आर्थिक करिडोरसित जोड्न तयारी भइरहेको छ । यो पश्चिमदेखि दक्षिण चीन सागर हुँदै हिन्द महासागरतिर बढिरहेको छ । अगाडि गएर यसलाई चीन–पाकिस्तान करिडोर तथा बंगलादेश–चीन–भारत–मान्मार इकोनोमिक करिडोरसित जोड्ने योजना छ । अर्को शब्दमा भन्न सकिन्छ कि स्वेज तथा मलक्काबाट अरबको खाडी तथा इस्ट कोस्ट अफ अफ्रिका एक हुनेछन् ।
रिपोर्टका अनुसार चीनको नजर यहीँसम्म सीमित छैन । मलक्का, ग्वादर, क्याउकप्यु, कोलम्बो तथा श्रीलंकामा हमम्बान्तोतालाई पनि अंकित गरिएको छ । यसका अतिरिक्त इथियोपियाका साथै जिबुटी तथा मोम्बास्का हुँदै नैरोबीलाई जोड्ने तयारी छ । हिन्द महासागरमा वान बेल्ट वान रोडलाई लिएर चिनियाँ नौसैनिकको उपस्थिति बढिरहेको छ । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको रिपोर्टअनुसार हिन्द महासागरमा १९८५ मा पहिलोपटक चिनियाँ युद्धपोतहरूले यस क्षेत्रको ढोका ढकढकाएका थिए । यसपछि चिनियाँ नौसैनिकको गतिविधि बढ्दै गएको छ । रिपोर्टअनुसार चीनको चौतर्फी विस्तारबाट भारत आफू चारैतिरबाट घेरिँदै गएको महसुस गरिरहेको छ । भारतले यसलाई आफ्नो प्राचीन सभ्यताको प्रभावमाथि चीनको अतिक्रमणका रूपमा हेरिरहेको छ ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रतापछि भारत रणनीतिक रूपले रुसको निकट रह्यो । यद्यपि २१औँ शताब्दीमा भारत अमेरिकाको निकट आयो । तर, चीनसँग भने उसको निकटता कहिल्यै रहेन । चीन र पाकिस्तानबीचको सामरिक सहयोग कसैबाट लुकेको छैन । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरबाट पाकिस्तान आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छ । प्रस्ट छ, सिपिइसी चीन तथा पाकिस्तानको महत्वाकांक्षी परियोजना हो । चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई तिब्बतको हिस्सा बताउँदै आएको छ । यसका साथै, चीनले भुटानमा भारतको हस्तक्षेपको आरोप लगाउने गरेको छ । नेपाल र चीनबीच बढ्दो सम्बन्धका कारण पनि भारतको चिन्ता बढेको छ । एक रिपोर्टमा लेखिएको छ– चीनको बढ्दो प्रभावबीच भारतको जापान र अमेरिकासितको सम्बन्ध थप सुमधुर बनिरहेको छ ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ– भारत अहिले कमजोर स्थितिमा छ । जापानजस्तो भारत अमेरिकाबाट संरक्षित छैन । भारतले सामरिक स्वायत्ततामाथि जोड दिइरहेको छ । र, यो पनि साँचो हो कि ऊ अमेरिकाबाट संरक्षित हुन चाहँदैन । यो प्रस्ट छ कि यदि चीन र भारतबीच युद्ध भयो भने यसको अर्थ यो अमेरिकासितको युद्ध हुनेछैन । किनकि, भारत जापान होइन । यस रिपोर्टअनुसार भारतविरुद्ध चिनियाँ कारबाहीमा अमेरिका सायद आपत्ति जनाउन सक्छ । तर, मौलिक रूपमा यसको नतिजा बदल्नेछैन । भारतीय सेनाको आधुनिकीकरणको गति निकै सुस्त छ । सैन्य शक्तिको मामिलामा चीन भारतको तुलनामा निकै अघि छ । भारत आफ्नो सैनिकको आधुनिकीकरण अमेरिका तथा जापानको सहयोगबाट गरिरहेको छ । यस्तोमा चीन आफ्नो श्रेष्ठता कम हुनुभन्दा पहिल्यै भारतलाई पाठ सिकाउन चाहन्छ भन्ने पनि अनुमान गरिँदै छ ।
ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ– भारतले यसपटक चिनियाँ सम्प्रभुताको जोडदार उल्लंघन गरेको छ । चीनलाई यस मामिलामा पूर्णतः तयार रहनु आवश्यक छ । नयाँदिल्ली चीनको बढ्दो प्रगतिबाट चिन्तित छ । सिमानामा भारतको उक्साहटपूर्ण कदमबाटै प्रस्ट छ कि ऊ चीनको ध्यान विकासबाट कहीँ अन्यत्रै भड्काउन चाहन्छ । -बिबिसी हिन्दी डट कमबाट